Ịkparịta ụka n'Socialntanet na Tradezụ Ahịa Gị | Martech Zone
Ịkparịta ụka n'Socialntanet na Tradezụ Ahịa Gị
Na Tọzdee, Septemba 11, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị nwere ohere ige anyị na N'ajụjụ ọnụ anyị na Crystal ili nke Nri, ị maara obi ekele anyị nwere maka ndị nhazi ihe omume. O nwere ike ịbụ na ọ dịghị ọrụ siri ike n'ahịa ebe ọ bụ na ndị na-ere ahịa ihe omume na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu gafee ọwa yana ịrụ ọrụ na oge siri ike na igbu. Don't nwetaghị ohere nke abụọ site na mmemme - ị ga - emezi ya nke mbụ.
Ihe omume bụ ụzọ dị mma iji jikọọ na ndị ahịa, ndị mmekọ azụmaahịa, ndị ọrụ ọhụụ na ndị nwere mmetụta na ụlọ ọrụ gị. Mụọ otu esi eji social media iji nweta ọtụtụ ihe ịga na ngosipụta ọzọ gị.
Ihe onyonyo okike nke Northwest etinyela ihe omuma a na ịkparịta ụka n'socialntanet na usoro ịzụ ahịa gị. Northwest Creative Imaging na-enye ụlọ ahịa ihe ngosi ahịa kachasị ewu ewu, ngosi ngosi ahia, na mbipụta usoro buru ibu na ọnụahịa ọnụ.
Video: Youtube Video mgbanwe 2.0